तपाईँ साग कतिको खानु हुन्छ र तपाईँलाई कुन साग सबैभन्दा बढी मन पर्छ ? हुन त बजारमा वा तपाईँको करे’साबारीमा विभिन्न प्रजा’तीका सागहरु सजिलै पाउन सकिन्छ । तर, तपाईँले प्रयोग गर्ने सागहरुको प्रजातिमध्ये एक हो फर्सीको मुन्टा वा भनौँ फर्सीको पातको साग ।
उसो त फर्सी पनि खानु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै नै ला’भकारी हो । तर, फर्सीको पात वा मु’न्टा खानाले हामी विभिन्न रो’गबाट जोगिन सक्छौँ । फर्सीको पातको साग वा फर्सीको मु’न्टा खानुको फाइदाबारे सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले आज हामी तपाईँलाई फर्सीको मु’न्टाको साग खानुको फाइदाबारे जा’नकारी दिन चाहन्छौ ।
फर्सीको साग विभिन्न पौ’ष्टिक तत्वले भरिएको हुन्छ । फर्सीको साग भिटामिन ई, सी, ए, बी ६, पोटा’सियम, फो’लिक ए’सिड, क्या’ल्सियम, कपर, प्रो’टिन, आ’इरन, फाइ’बर, फ’स्फोरस जस्ता खनि’ज पदा’र्थको राम्रो स्रो’त हो । हामीलाई स्वस्थ रहन का लागि शरीरमा यि सबै त’त्वको आवश्यकता पर्दछ ।
युए’सडीए नेशनल न्युट्रि’यन्ट्स अध्ययन अनुसार फर्सीको पातमा यति धेरै गु’णहरू हुन्छ कि तपाईँलाई ख’तरनाक रो’गबाट जो’गिन मद्दत गर्छ । फर्सी’को पातलाई आफ्नो नियमित भोजनमा समावेश गरेर तपाईँ उच्च रक्त’चाप, को’लेस्ट्रोल, क्या’न्सर जस्ता खत’रनाक रो’गबाट सुरक्षित रहन सक्नु हुनेछ । फर्सी कत्तिकाे मन पर्छ ? मन नपरेपनि खाने गर्नुहाेस, फाइदा सुनेर अचम्ममा पर्नुहुनेछ ।
तरकारीको रुपमा प्रयोग हुने विभिन्न तरकारीहरू मध्ये फ’र्सी पनि एक निकै उपयोगी तरकारी हो । फर्सी स्वास्थ्यका दृष्टि’कोणले पनि निकै फा’इदाजनक मानिन्छ। फर्सीमा भिटा’मिनको मात्रा निकै बढी पाइन्छ भने अन्य पौ’सष्टक पदार्थ पनि उत्तिकै पाइन्छ ।
यसमा पाइने पौ’ष्टिक तत्व र यसका फाइदाहरू के के छन् त ?
१. २५० ग्रा’म फर्सीमा मात्र ४९ क्या’लोरी पाइन्छ । फर्सीमा कार्बो’हाइ’ड्रेटको मात्रा निकै कम हुन्छ भने यसले शरीरमा रहेको कोल’स्ट्रोलको मात्रालाई समेत कम गर्ने काममा मद्दत पुग्छ।
२. फा’इबर, भि’टामिन ए, सी र ई तथा अन्य पौ’ष्टिक पदा’र्थ पनि यसमा पाइन्छ । जसले हाम्रो स्मरण क्षम’ताको विकास गर्नुका साथै रेडि’कलहरू ल’ड्नका लागी समेत मद्दत गर्छ।
३. पहेँलो भएर पाकेको फ’र्सी झन् फा’इदाजनक हुन्छ । यसमा हुने बेटा क्या’रोटिन, एन्टिअ’क्सि’डेन्टले हाम्रो शरीरमा क्या’न्सरको स’म्भावनालाई समेत कम गर्छ भने मु’टु रोगमा समेत फाइदा गर्छ ।
४. फर्सीको बियाँ पनि उत्तिकै फाइदा जनक हुन्छ, यसको बियाँबाट मनग्गे मात्रामा प्रो’टिन, भिटामिन, फ्या’टि एसि’डहरू पाइन्छ। यसले शरीरमा चाहिने पौ’ष्टिक पदार्थको आवश्यकतालाई पुरा गर्न समेत मद्दत गर्छ।
५. यसको बि’याँमा पाइने म्याग्ने’सियम, पोटा’सियम, जि’न्कले शरीरलाई स्वस्थ, स्मरण शक्तिको विकास, हा’डलाई बलियो बनाउन समेत मद्दत गर्छ।
६. फर्सीले का’र्डियोभा’स्कुलर रो’गहरूमा समेत फाइदा पु¥र्याउँछ भने त’नावलाई समेत कम गर्न मद्दत गर्छ ।
७.कम’लपित्त, क्षय’रोग, बढी ति’र्खा लाग्ने, कले’जोमा ख’टिरा जस्ता रोगलाई कम गर्न सहयोग पु¥र्याउछ ।
८.क’ब्जियत भएमा तथा टाउको दु’खेमा पनि फाइदा गर्छ ।
९.पाय’ल्स र शरीरभित्र जलन हुँदा पनि फलदायी हुन्छ ।
१०.गाई’वस्तुमा थुने¥लो रो’ग लागेमा पाकेको फर्सीको भेट्नु पानीमा घो’टेर लगाउँदा ठिक हुन्छ । यसको लेपले वि’षालु कि’राको विष पनि हट्छ ।
११.फर्सीको बियाले शरीरमा भएको प_त्थरी निकाल्छ ।
१२.फर्सीको बियाँ छोडाई यसलाई पिँधेर ओठमा लगाउँदा ओठ फु’टेको, चि’रिएको तथा सु’ख्खापन भएको नि’को हुन्छ ।
१३.नि’न्द्रा नलाग्ने रोगमा पनि यसले फाइदा गर्छ ।
१५.फर्सीका १०–१५ बियाँ निय’मित खाँदा छाती पो’लेको ठीक हुन्छ ।
२०७७ चैत्र १५, आईतवार १३:३० गते 1 Minute 918 Views